Saturday July 13, 2019 - 20:53:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Taliska ciidanka Xarakada Al Shabaab ayaa faah faahin dheeri ah ka bixiyay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee shalay ka dhacay Hoteel kuyaal magaalada Kismaayo.
Sheekh Cabdi Caziiz Abuu Muscab oo ah Afhayeenka ciidamada Al Shabaab ayaa Shir Jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in ciidamadoodu ay beegsadeen saldhig ciidan oo Hoteel loo ekeysiiyay sida uu hadalka u dhigay.
Mar uu faah faahin ka bixinayay qaabkii uu weerarku udhacay wuxuu sheegay in lagu bilaabay gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay kadibna dagaalyahanno hubeysan ay gudaha Hoteelka udaateen halkaas oo ay dad badan ku laayeen.
Abuu Muscab wuxuu xaqiijiyay in dadkii ay dileen ay kamid ahaayeen shaqaale u shaqeynayay hay'ado shisheeye kuwaas oo shirqoollo umaleegayay shacabka Soomaaliya wuxuuna carabaabay in dadkii weerarka lagu beegsaday ay kamid ahaayeen Xildhibaanno iyo saraakiil katirsan dowladda Federaalka oo ammaan darro aawgeed ugasoo cararay Muqdisho.
Afhayeenka ciidamada Al Shabaab ayaa soo hadal qaaday dadka Soomaalida ah ee baasaboorada shisheeye sita kuwaas oo dowladaha ay metelaan ugu dhaartay in ay shacabka Soomaaliyeed diinkooda iyo dhaqankooda ka fitneeyaan.
Halkan ka dhageyso Shirka Jaraa'id ee Abuu Muscab oo dhameystiran MP3